SIDA LOO DARYEELO STRAWBERRIES KA DIB GOOSASHADA - STRAWBERRIES
Beeraley kasta oo doonaya in uu helo strawberries dhadhan fiican leh, weyn oo casiir leh xilli ciyaareedkan. Oo waxaa la joogaa wakhtigii si aad u daryeesho goosashada mustaqbalka isla markiiba ka dib goosashada.
Daaweynta berry-karku waa geedi socod dheer, oo ku dhowaad dhammaan xilli-ciyaareed, laakiin waxay dareemeen daryeel ninkii beerta ka shaqaynayay, strawberries ma dhicin isaga oo leh miro deeqsi ah. Tixgeli sida loo daryeelo ciidda ka dib goosashada cawska.
Gooyo caleemo strawberry jir ah iyo weel
Warshadu waxay u wareejisay soodheeda si ay uhesho beruudha, hadda hawsha beerta ayaa ah in ay ka caawiso duurka ku soo kabashada, siin fursad ay ku sameeyaan caleemo cusub oo u diyaargarow jiilaal dheer si ay u noqoto dalag hufan soo socda.
Waa muhiim! Warshad shan sano ah ee strawberries waa in lagu beddelo dhirta dhalinyarada.
Marka uu soo ururiyo berry ugu dambeyntii bilowga xagaaga, waa lagama maarmaan in la fuliyo sariiraha haramaha oo leh strawberries, sababtoo ah muddada oo dhan ee jaridda dhirta fruiting aan la fulin. Ka dibna nadiifi cawska, balka, cirbadaha geed iyo mulch kale oo taxaddar leh furo ciidda ka yar duurka iyo walwalka.
Dabayaaqadii Luuliyo, waxaa lagu talinayaa gooyaa jir ah, qalajinta caleemaha strawberry, caleemaha iyo caleemahamarkaad ka baxayso hoose ee baadiyaha leh height ah 50 mm. Tallaabada noocan oo kale ah ayaa lagu dabaqi karaa baadiyaha sanadka labaad iyo seddexaad ee nolosha.
Waxyaabaha la gooyey waa in laga saaraa sariiraha. Nidaamkaas naxdinta leh ee bukaanka ah ayaa siin doona baadiyaha fursadda ah inay sii daayaan caleemo cusub iyo burooyinkeeda xilliga dayrta.
Helitaanka caleemo badan oo la tuuro geedka, su'aal dabiici ah ayaa soo baxaysa: waxa la samaynayo shaarbob strawberry. Dabeecadda ayaa qeexaysa in shaarbaaxo strawberry loo baahan yahay oo kaliya loogu talagalay dhalmo.
Sidaa darteed, haddii ay lagama maarmaan tahay in dacaayad strawberries, antenna ugu xoogan ayaa loo tagay for rooting, iyo geedo dhalinyarada dhalidda waxaa la kala soocaa dayrta iyo transplanted sariiraha.
Shaararka haray waa in laga saaraa, maaddaama ay ka qaadi doonaan casiirka iyo xoogga kaynta hooyada, taas oo ka dhigaysa mid daciif ah oo yaraynaysa goosashada sanadka soo socda. Kala saar warshad aan lagama maarmaan u ah beerta whiskers gooyay sida ugu hooseeya ee suurtogalka ah ee dhulka la gooyo budo ama mindi.
Jebinta geeddi-socodka waa mid khafiif ah oo ka soo baxaya iyo dhimashada geedka oo dhan. Maadaama ay strawberry ku shubtay dhowr shimbir dhowr jeer inta lagu jiro xilliga diiran, xoqin of whiskers waxaa la fuliyaa dhowr jeer sida ay u muuqdaan. Tani waxay ka ilaalin doontaa baadiyaha kharashka aan loo baahnayn ee dadaalka.
Sida loo quudiyo strawberries ka dib goosashada
Warshadu waxay u baahan tahay nafaqo wanaagsan si ay u soo kabato, sidaa daraadeed waa lagama maarmaan bacriminta strawberry goosashada ka dib. Waxaad u qaadi kartaa sidan: Potassium sulfate, ammonium nitrate iyo superphosphate ee saamiga 1: 1: 3 kala diri biyaha iyo ku shub walaaq la xal this.
Strawberries sidoo kale waxay noqon doontaa mid waxtar leh in la rusheeyo saldhigga geedkii leh biohumus, compost qudhuntay, ama ku daboolaya warshad leh qaybo digada qalalan. Waxaad quudin kartaa beeritaanka strawberry, rusheeyey, ash qoryaha la jajabiyey - 2 kg halkii mitir labajibbaaran.
Ma taqaanaa? Ka dib laba bilood oo koritaan ah, caleemaha strawberry waxay bilaabaan inay bilaabaan da'da.
Sida loo boodo qudaarta ka dib goosashada
Marka la goosto, strawberries uma baahna waraabin degdeg ah ee ciidda. Waxaa lagama maarmaan ah in lagu waraabiyo duurka kaliya muddada qalalan. Waxyaabaha ugu muhiimsani maaha in ay dhulka u oggolaadaan in la qalajiyo ka dib marka la sameeyo fruiting.
At site ee strawberries sii kordhaya ayaa lagu talinayaa mulching ciid caws, peat ama balka - tani waxay ku jiri doontaa qoyaanka ciidda. Ka dib markii la waraabiyo, ciidda ku hareeraysan cawska waxay ku qallajinayaan wax yar oo si taxadar leh u dabciyaan carrada sariiraha.
Sida loo hirgeliyo strawberries si looga hortago cudurada iyo cayayaanka
Ka dib marka la dhamaystiro warshadda jejebinta waa in la kormeero oo soo saaraa daaweynta cudurrada iyo cayayaanka.
xayrta maqaarka - Waxaa lagu muujiyey ubaxyada cawska ah ee caleenta, kuwaas oo rushood, boog iyo dhaco. Daaweynta, sariiraha waxaa lagu daaweeyaa xal sulfur kolloid ah - 50 garaam 5 litir oo biyo diirran ah.
kallana madow - Waxay u muuqataa in ay tahay dhibco cilladeysan oo saameeya berry, waxaa lagu daaweyn karaa xal copper chloroxide - 40 garaam 10 litir oo biyo ah.
kalluun madow - mawjada analooga, kaliya dhibcaha on berry waa madow, hababka daaweynta waa isku mid.
xoqin - Dhaawac caleen ah oo leh dhibco madow ah, ka takhalus xashiishka oxychloride - 50 garaam 10 litir oo biyo ah.
Waa muhiim! Caleenta midab guduud ah ayaa la googooyaa oo lagu gubaa diyaarinta jiilaalka - waxa ay badbaadin doontaa beeritaanka cayayaanka
Meelaha for berry sii kordhaya u baahan tahay halgan joogto ah iyo ilaalinta ka soo cayayaanka strawberry.
Inta badan soo noqnoqda cayayaanka:
Weevil strawberry - cayayaanka cayayaanka cunta iyo burooyinkeeda, ka takhalus isaga oo ku buufinaya duurka karbofos - 75 g 10 litir oo biyo ah.
cayayaanka strawberry - Cayayaanka yaryar, joogitaanka taas oo soo saarta caleenta caleenta ah. Ka takhalus isaga si la mid ah sida weevil.
caarada caarada - wuxuu sameeyaa shabakad caleenta ah, dagaalka ka dhanka ah wuxuu ka kooban yahay daaweynta warshadda leh xal phytoverm ah, iyo sidoo kale jarida iyo gubista dhammaan caleemo ka dib dhamaystireen fruiting.
Ma taqaanaa? Strawberry fruiting fruiting wuxuu soconayaa afar sano, ka dib markii uu hoos u dhaco.
Markaad sariirta ku siisay daryeel habboon ka dib goosashada, waxaad ku xisaabtami kartaa goosashada wanaagsan ee berry sanadka soo socda. Marxaladaha ugu muhiimsan ee daryeelka strawberry: ka saarista caleemo iyo geeddi-socodka, waraabinta dhexdhexaadka ah, bacriminta, dabacsan, mulching carrada, iyo sidoo kale kantaroolka waqtigu ee cayayaanka iyo cudurada strawberries.